Thwebula OpenOffice 4.1.1 – Vessoft
OpenOffice – one of the ehola amaphasela software ukusebenza nge izinhlobo ezahlukene kwemibhalo. Isofthiwe kwenza ukuhlela imibhalo, ukudala spreadsheet nezethulo, ukusebenza ne ihluzo kanye vector izithombe, inqubo yolwazi, njll OpenOffice iyahambisana iningi takhiwo main, kuhlanganise siqu ODF format yayo futhi Microsoft Office takhiwo. Futhi isofthiwe ine ukusebenza ocebile futhi ezahlukene izilungiselelo nezimo. OpenOffice ine interface-to-ukusetshenziswa lula futhi enembile.
A isethi eyodwa yombhalo enamandla nabahleli graphic
Export kwemibhalo in PDF format
Oluvumelana ngamafomethi yezinye amaphakheji ehhovisi
Ezahlukene izilungiselelo nezimo
Amazwana on OpenOffice:
OpenOffice Ahlobene software:
English, Afrikaans, Українська, Français... AdwCleaner 6.042
Українська, Français, Español, Deutsch... Scilab 5.5.2
English, Afrikaans, Українська, Français... HandBrake 1.0.1